Hazi GPS Tracker iji nweta map na Internet – Taylor Lopes ツ Blog
Naa na nke ukwuu anọghị ná nchebe na ego isi ike, anyị na-eme ihe nile iji were mmebi. Ma njọ karịa inwe a zuru ụgbọ ala, Ọ bụ inwe ezinụlọ na nsogbu a ụgbọ ala, Chineke maara ebe. na a Tracker ị ga-enwe ike igbochi nke a site na-eme, ma ọ dịghị ihe ọzọ i nwere ike chọọ na iziga ndị enyemaka ịmata kpọmkwem ọnọdụ nke ụgbọala.
O doro anya na nke a pseudo obi iru ala nwere na-eri. The Tracker ị zụrụ maka $ 150,00 na nkezi, ama ịnọgide na-enwe a mgbawa telephony Packet Data si gburugburu R $ 10,00 kwa ọnwa, iji M2M System (Machine na Machine). mgbe ahụ, kwesịrị ya ma ọ bụ? ọma, onye ọ bụla maara ebe callus presses, nke kwesịrị ka a na-echebe ma ọ bụ na. Ma, dị ka ha na-ekwu “dị nnọọ adịghị eji etinye na mkpọchi mgbe gbajiri agbaji n'ọnụ ụzọ”. M kpebiri na-agbalị ;)
e Trackers na ndị ụgbọala were. M ikpe, M zụtara a TK103A (Coban), n'ihi na echiche bụ na-etinye na ụgbọ ala inyocha ụfọdụ maara ụzọ. Ma, nsogbu bụ na mgbe ị zụrụ a GPS Tracker, ọ dịghị onye chọrọ ịbụ eziga iwu na inweta ihe na-achịkọta SMS (ederede). Nke a bụ manụ! Ị chọrọ ịhụ “ihe” ọ dịghị map, ezigbo oge. Ya mere, bịanụ!
M na-anwale atọ usoro online map maka crawlers. Ha niile gbara ọsọ ka afọ ojuju:
1) GPS-Trace (oroma – free).
3) CorvusGPS (ugwo – $0.02/ụbọchị)
E nwere ihe abụọ nkebi nhazi na a ga-kọwara n'okpuru ebe a:
1) Isetịpụ na Tracker (ọ bụrụ, na TK103)
2) Mwube nke Site / Web usoro na captures achịkọta efego map.
M ga-egosi nhazi iji GPS-Trace, TrackerHome e o CorvusGPS, Ọ bụ gị na-ahọrọ, ma m ike ikwu na ị na-eji a Mgbawa M2M na GPS-Trace.
Tupu ịmalite, -atụle na gị Tracker (TK103A ngwaọrụ) Ọ bụ ugbu a na zuru ọrụ, ndị ọzọ okwu, ịnakwere iwu site na SMS zitere onye nchịkwa mobile, Gịnị ka i =)
Ọ bụrụ na ị mere otú, a lee anya na nke a TK103 ntuziaka na Portuguese. Ihu ọma ị dị nnọọ mkpa ka ịgbakwunye ọnụ ọgụgụ nke gị cell ikike Tracker anata na-ezipụ ozi.
N'ihi na ihe niile na-arụ ọrụ, jide n'aka na kaadị SIM nwere ozi ederede plan (SMS) na data (internet) nyeere. Ị nwere ike nwalee a site ịtụkwasị gị mgbawa (ime Tracker) a cell, na-eme na-eziga SMS ule na igodo tupu ya etinye ya na Tracker na-amalite na ntọala.
Mgbe ị na-ajụ a ẹkesikpede iji wụnye gị Tracker n'ime ụgbọ ala, ijide n'aka na ọ ga-etinye mpi GPS na GSM mpi nke na-abịa na tracker, a kwesịrị ekwesị ebe n'ime ụgbọ ala.
Ọ nwere na-a-emeri na ebe ka siri ike akụkụ / metal ụgbọ ala ga-eme ka nnyonye anya na belata satellite mgbaàmà (GPS) na telephony (GSM). ma, echetakwa ga-ezughị n'ihi na tracker ike nweta (GPS) na-ebunye (GSM) na ala-ahazi data n'ụzọ kwesịrị ekwesị na-egosipụta na map ga-isi (unreliable).
No YouTube nwere ụfọdụ videos na-akọwa ebe kacha mma egosiputa poolu.
ogbo 1 – Isetịpụ na Tracker
– A nhazi akọ, ndị Tracker TK103A, ọ bụ ezie na o nwere ike na-arụ ọrụ na yiri ụdị.
– Iji gesso, anyị ga-eji ndabara paswọọdụ na- 123456, ma i nwere ike ịgbanwe ya ma ọ bụrụ na ị chọrọ (Lee n'elu-e kwuru ntuziaka).
– mgbe itinyere, eji akwụkwọ ozi na elu ikpe / lowercase kpọmkwem dị ka e gosiri na onye ọ bụla iwu.
– Tinye ala ụgbọ ala gị na-emeghe ebe (bụghị n'ime ụgbọala)
M ga-depụta niile iwu sequentially na, mgbe, na-akọwa-na. Ya mere ebe a bụ a zuru ezu nhazi nke tracker iji TK103 Mgbawa Vivo M2M na GPS-Trace Maps. Send ndị na-esonụ SMS ozi na ekwentị mkpanaaka gị na tracker si mgbawa nọmba:
admin123456 5561983030102 //na-enye ohere na ekwentị gị ka izipu iwu. alaghachi: "admin ok!"
password123456 112233 //mgbanwe paswọọdụ 123456 maka 112233. Họrọ a paswọọdụ 6 ọnụọgụ
begin112233 //alaghachi: "begin ok!"
GPRS112233 //alaghachi: "GPRS OK!"
up112233 ndụ ndụ //alaghachi: "user,paswọọdụ ok!"
admin123456 5561983030102 //na-enye ohere na ekwentị gị ka izipu iwu. alaghachi: "admin ok!" password123456 112233 //mgbanwe paswọọdụ 123456 maka 112233. Họrọ a paswọọdụ 6 dígitos begin112233 //Retorna: "begin ok!" GPRS112233 // alaghachi: "GPRS OK!" adminip112233 193.193.165.166 20558 APN112233 smart.m2m.vivo.com.br up112233 vivo vivo //Retorna: "user,paswọọdụ ok!" fix030 s *** n112233
dị ka m kwuru, n'elu m ji GPS-Trace nhazi + ndụ M2M. n'okpuru, M ga-ahapụ njikere ụfọdụ ndị ọzọ n'ịgwa nke ntọala, ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ ndị ọzọ map nkesa na ọzọ ụgbọelu (mgbawa). Anyị nwere isii atụ, họrọ naanị otu! Nịm ma iji GPS-Trace, TrackerHome ma ọ bụ CorvusGPS na, si gị mobile, eziga ndị na-esonụ SMS ozi na ekwentị mkpanaaka gị na tracker si mgbawa nọmba:
1)GPS-Trace + ndụ M2M
2)TrackerHome + ndụ M2M
3) CorvusGPS + ndụ M2M
begin123456 Ọ na-eme a nrụpụta niile ntọala ụlọ ọrụ ndabere
GPRS123456 Hazi Tracker GPRS mode (ndabara bụ SMS). Nke a na-akpata ozi e zigara a nkesa na Internet kama ederede ozi (SMS)
APN123456 tim.br Setịpụrụ APN gị GPRS. Acess Point Name (APN) Ọ-enye gị ohere jikọọ gị Internet na-eweta ọrụ. A nhazi na-adabere na mgbawa na ị na-eji. I nwere ike ịkpọ nke a ndepụta niile APN: https://www.followmee.com/APNList.aspx
adminip123456 202.104.150.75 9000 Setịpụrụ IP na map na-eweta ụzọ. Ị ga-ahọrọ iji GPS-Trace, TrackerHome ma ọ bụ CorvusGPS, n'ihi na onye ọ bụla nwere ya kpọmkwem IP / n'ọdụ ụgbọ mmiri.
up123456 otu ìgwè Nịm na aha njirimara na paswọọdụ GPRS njikọ APN
fix030 s *** n123456 Hazi nkeji oge na Tracker ga-akọ na-achịkọta. na nke a, onye ọ bụla 30 sekọnd.
ogbo 2 – Mwube nke Maps Site
Iji nweta IMEI gị tracker (TK103), eziga ndị na-esonụ SMS ozi na ekwentị mkpanaaka gị na tracker si mgbawa nọmba:
imei123456 //123456 Ọ bụ ndabara paswọọdụ, ma ọ bụ dochie na paswọọdụ gị. alaghachi: nọmba IMEI
Ọ bụrụ na ị họọrọ iji GPS-Trace, mee ihe ndị a:
1. ohere http://gps-trace.com/, na họrọ “Banye” na “Mepụta akaụntụ maka free” ịmepụta otu akaụntụ.
2. Abanye http://orange.gps-trace.com/ na-amalite na ntọlite.
3. Pịa bọtịnụ “Mee ọ rụọ ọrụ” ma jupụta na ubi:
– aha: Efere ma ọ bụ nlereanya nke ụgbọala gị,
– ID naanị: nọmba IMEI gị,
– ekwentị Number: mgbawa nọmba na tracker (Ex: +556198761234),
– Password iji nweta ngwaọrụ: Tracker paswọọdụ
4. Mgbe azọpụta ma na-emechi na ihuenyo ikpeazụ, Your Tracker ga-egosi na nri. Ọ bụrụ na ihe niile na-arụ ọrụ, akara ngosi ga-atụgharị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, -egosipụta na map ọnọdụ nke gị Tracker.
jaa: m ikpe, akara ngosi bụ naanị arụsi ọrụ ike na Ndepụta naanị pụtara na map mgbe a nkeji ole na ole, mgbe m na-eje ije na ụgbọ ala.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ndị ọzọ, na-ekiri ndị video Clebson Lima “Otú aha NA Tracker TK103 303 NO SITE DA oroma”:
e, ma, ngwa maka mobile ngwaọrụ dị na Google Play e IOS.
Ọ bụrụ na ị họọrọ iji na TrackerHome, mee ihe ndị a:
1. ohere http://www.gpstrackerxy.com/, na họrọ server1 na pịa “Register” ịmepụta otu akaụntụ (-Ahụ IMEI ezipụ SMS gị Tracker na iwu “imei123456”).
2. Abanye na na pịa menu “System Ntọala> enweghị Ngwọta Management” ịgbakwunye gị Tracker.
3. Pịa bọtịnụ “tinye” ma jupụta na ubi:
– IMEI No: nọmba IMEI gị,
– aha: Efere ma ọ bụ nlereanya nke ụgbọala gị, e
– model: Họrọ Track nhọrọ
4. Mgbe azọpụta ma na-emechi na ihuenyo ikpeazụ, Gị Tracker ga-apụta na n'aka ekpe. Ọ bụrụ na ihe niile na-arụ ọrụ, otu bọl akara ngosi ga-atụgharị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, -egosipụta na map ọnọdụ nke gị Tracker.
Ọ bụrụ na ị họọrọ iji na CorvusGPS, mee ihe ndị a:
1. ohere https://corvusgps.com/ na ịmepụta otu akaụntụ (Mepụta a Free akaụntụ).
2. Abanye na na pịa nhọrọ “GPS Trackers”.
3. Tinye gị Tracker (tracker) site na ịpị “Tinye ọhụrụ GPS Tracker”:
– Họrọ ngwaọrụ, m ikpe, na TK103
– Họrọ a aha maka ngwaọrụ, O nwere ike ịbụ a akara ma ọ bụ mbanye efere
– Report nọmba IMEI gị Tracker
(-Ahụ IMEI ezipụ SMS gị Tracker na iwu “imei123456”)
4. Mgbe na-agbakwụnye gị Tracker, pịa nhọrọ “Gosi na map” na njikere, Ọ na-egosiputa a map na ọnọdụ nke gị Tracker (ụgbọ ala).
The ukara website nke CorvusGPS ị na-ahụ onye ọrụ ntuziaka para TK102 e TK103 GPS Tracker.
Ma saịtị na-enye ndị ọzọ na-akpali ntọala, gụnyere iche iche nke map.
DỊ mKPA: Ọ na-atụ aro, mgbe configuring, a mpịakọta 5 a 15 nkeji na ụgbọala na ikwado njirimara nke Tracker site map sava (kpọọ / data nnyefe).
ege / Monitor
Ị nwere ike ịhapụ Tracker na ụzọ “Monitor” ịnụ ihe niile gburugburu.
Iziga SMS iwu n'okpuru na-eche maka nzaghachi “Monitor Ok”. mgbe a, eme ka a oku ka tracker nọmba ekwentị na ị pụrụ ige ntị na gburugburu ebe obibi.
gbanyụọ na-ege ntị
ma ka na-, ma ọ bụrụ na ị na-eji a n'ezie na-usoro WEB dị ka TrackerHome ma ọ bụ CorvusGPS, -eme ka:
Nke a na atụmatụ bụ na-akpali, n'ihi na ị na-amara gị ọkwa ma ọ bụrụ na ụgbọala nke ebe :)
Kwado ije mụrụ anya
Iziga SMS iwu n'okpuru na-eche maka nzaghachi “-akpali Ok”. Na ihe omume nke ọ bụla ije, na ị nweta SMS “Paghaa” na-achịkọta.
Gbanyụọ ije mụrụ anya
M2M mgbawa ekwentị – Machine na Machine
Ị nwere ike iji a nkịtị mgbawa cell na hà data, ma anaghị m nye ndụmọdụ, ọ na-efu nke ukwuu, ma akwugo ugwo ka ọnwa plan. na TIM, n'ihi na ihe atụ, na-a mgbawa ga-eri na nkezi $ 35,00.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọgide na a ọnụ ala mgbawa gị tracker, M2M Ọ bụ doro anya na ihe kasị mma nhọrọ. Na nke a n'onwe (M2M) ị ga-anọ na nkezi, ọ bụ $ 10,00. Dị ka M2M emekarị anaghị abịa na SMS ngwugwu (naanị data), ọ dị mma na ị na-eme na mbụ crawler ntọala na a mgbawa nwere SMS, mgbe ahụ dị nnọọ gbanwee. M na-anwale ma na-arụ ọrụ n'ụzọ zuru okè.
Ị na-ahụ na free ahịa Mgbawa Vivo Unlimited M2M Iji Tracker (Monthly plan) a R $ 10,00.
Total accesses: 179085
38 reviews “Hazi GPS Tracker iji nweta map na Internet”
Daniel Moreira Gomes kwuru:
M ga-achọ iji ndị GPS Tracker V.2.0.0.2 omume jikwaa m TK103.
Send Ip nke m njikọ, redireciono a porta 9000, ihe niile ziri ezi.
Ma mgbe ị ịgbakwunye tracker ndị na-esonụ ozi na-egosi “IMEI invalidation”.
Si ama na-ekele gị.
18 October 2016 ka 15:46
Reinaldo Martins kwuru:
M mmasị gị enyemaka n'ihe banyere Tracker GPS na otú ahụ ka m m edetara unu akwụkwọ, M mere a ndudue na-ehichapụ na IMEI ahụ dị n'elu ikpo okwu dị ka ị kụziiri, ma ugbu a, m na-agbalị reactivate ikpo okwu na-ekwu na nke a na akaụntụ dị adị na m nwere ka ihichapụ ihe nkesa, ị nyere m. na-ekele unu
2 November 2016 ka 13:00
Olee otú m ihichapụ a mbanye nke na-adịghị eji ihe ?
19 December 2016 ka 9:14
Enyi dị ka gosiri ma m ịbanye na saịtị na ụgbọala abụghị na map bụ naanị na-acha anụnụ anụnụ…otú ime? Nke a emeela ka
15 July 2017 ka 14:24
The ụgbọ ala adịghị oké osimiri mgbe ọ ga-abụ na mgbe na GPS na-emi odude.
N'ezie na nke a bụ a nsogbu na ọ dịghị onye kọwara ma ọ bụ na-amaghị, eleghị anya naanị Chinese onye kere saịtị a mara.
M nwere otu nsogbu, ụfọdụ videos akụziri otú aha GPS ma na omume ọ bụla na-eme na-enye ghọta na nsuso saịtị anaghị arụ ọrụ, dị ka nke ọma dị ka ndị nwere ole na ole informaçãos na enweghị a enyemaka nkuzi anaghị ebubo ọ bụla edinam ọbụna Ajọ GPS.É.
4 August 2017 ka 22:33
Roberto Martinez kwuru:
M nwere nsogbu IMEI, M na-adịghị anabata ya ma na-ekwu na ọ bụ na-ezighị ezi na-ama cale na 3 imeis ọzọ na bụghị wetara, M nwere ike inyere aka iji chọpụta ihe bụ nsogbu.
28 August 2017 ka 16:52
Antonio Gama kwuru:
izipu ozi na tracker imei123456 maka ezi IMEI na mgbe na naanị idekọ nri
28 September 2017 ka 0:21
M soro niile ntuziaka. The SMS iwu na-arụ ọrụ well.However m nwere nsogbu GPRS nsuso. Na web / ngwa i ahụ ụgbọ ala bụ offline. na ịlele ọnọdụ ọ na-ekwu GPRS bụ on. onye enyemaka
19 September 2017 ka 11:58
Ekwela iri ari ngwa n'ihi na ọ na ada ada nke ukwuu. eme ka ọ na site na emeputa website na nnọọ mma ma na-eziga ntọala n'ụzọ ziri ezi n'ihu iji saịtị.
28 September 2017 ka 0:10
Ekele maka nkọwa… m wee dị nnọọ mma….
22 September 2017 ka 11:16
Javier Carrillo kwuru:
M nwere otu nsogbu, ihe niile bụ ihe nnọọ ọrụ ma ọ bụghị gosiri na map, GPRS Gbanyụọ, ọbụna ma ọ bụrụ na ozi ziri ezi iji rụọ ọrụ (msgs: GPRS123456 na zara GPRS OK!).
Olee otú m nwere ike idozi ya?
M nwere otu nsogbu, ihe niile bụ ihe ọma ma ọ na-egosi na ọ na map, GPRS Gbanyụọ, ọbụna mgbe SMS bụ nri (msg: GPRS123456, na zara GPRS OK!)
Olee otú m na-edozi ya?
29 September 2017 ka 13:10
M nwere otu kpọmkwem nsogbu…
3 October 2017 ka 0:14
Welvisley Birth kwuru:
ehihie ọma, oge m akara n'ebe enwebeghị
13 November 2017 ka 12:47
Hello , Ana m enwe nsogbu ejikọta ndị tracker TK 103, mere nzọụkwụ site nzọụkwụ , M enyocha ekwentị , ma ọ dịghị ihe na-adịghị jikọọ na saịtị , ama nyere iwu site SMS blz, ta ihe niile nri, ọ na-arụ ọrụ na-eche.
10 February 2018 ka 21:20
Daalụ maka Ihe.
M ka ihe niile na-eji gị nkọwa na-arụ ọrụ n'ụzọ zuru okè.
15 February 2018 ka 9:54
Luciano Marquetti kwuru:
ehihie ọma, M na-agbalị ka aha m tracker, ma ọ na-ekwu na IMEI bụ ghara ịdị irè, M wee were ọnụ ọgụgụ na SMS na TBM otu nọmba na-abịa na igbe..
M mkpa na-atụgharị ihe ?
31 March 2018 ka 16:11
M ga-achọ ịma IP Tracker home bụ otu m ekele tk303.desde
11 April 2018 ka 9:55
Midian Ribeiro kwuru:
ụtụtụ ọma, m ratreador anabata ma ọ dịghị onye na SMS afọ iri na ụma, M nwere ike gbanyụọ ma ọ bụ nwee na ihe ọ bụla ma, olee otú m ga-esi ya azụ azịza, Coz na SMS nweta ihe ọ bụla.
26 April 2018 ka 9:42
sertamente ndị ọrụ egbochi eziga tracker mgbawa SMS
18 April 2019 ka 15:08
Val Max kwuru:
Friend ga-achọ itinye 30 trackers na otu aha na Orange. Olee otú m na-eme? Ị nwere ihe ọ bụla ụgwọ na akaụntụ?
24 July 2018 ka 15:31
M na-agbalị ka m IP tracker na saịtị ahụ na ọ na-akọ na e na-ama aha paswọọdụ. olee otú m na-agbalị iji weghachite ya??
24 August 2018 ka 16:20
Nancy VALLADARES kwuru:
Ndeewo m MY HOME Ọchọ ihe Ọchọ NA arụ ọrụ kwesịrị ekwesị ghọrọ A akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ME ma naanị unit NDỊ ỌZỌ jidere a agaghịkwa anọ na isi awọ chụọ n'ọrụ n'ihi na ?
Ọ bụrụ na ị na-ọtùtù
12 September 2018 ka 10:52
June moreira kwuru:
Dị nnọọ mma gị nkọwa! M mere ebe a na ihe niile na-arụ ọrụ. na-ekele unu
11 December 2018 ka 0:45
mario Chavez kwuru:
hello ọma n'abalị ị pụrụ inyere aka m melite m GPS tracker na ebe ọ bụ na m na Mexico na ebe-eziga m na Chinese ka m na-eme maka ED na Spanish mem
4 January 2019 ka 1:23
antonio Leandro Eze kwuru:
esi agbanyụ nkwụsị, ụgbọ ala azụ ka otu.
stop123456 ụgbọ ala ahụ,
? 123456 alloy ụgbọ ala.
29 January 2019 ka 22:13
18 April 2019 ka 15:06
Denis Herlan kwuru:
ehihie ọma, M na-agaghị na-edeba aha 5 Ndepụta NO ORGAGE, Ya mere amaghị Kedu Ụdị ngwaọrụ eji, MY tracker na TK-103 B, ekele unu
26 February 2019 ka 15:53
Hello, m bụ TK103 na bịanyere aka elu na Orange ka GPS103-B, dị ka adịghị Zipu. Ebe a na-arụ ọrụ, tinyere ha were na mobile App (FREE). kwuru!
5 March 2019 ka 18:56
Ana Lucia kwuru:
ọma n'abalị, M mere ihe niile nhazi ka kọwara…. ihe niile na-arụ ọrụ dị nnọọ mma… ma….
ụbọchị ọ bụla , dịghị mgbe 21:00 ka 00:00, na unit bụ na saịtị offline…. mgbe a azụ na-arụ ọrụ na-ejikarị…. M maara Tracker na-arụ ọrụ niile nri, Ọ na-eme site na SMS.
Onye ọ bụla mgbe nwere nsogbu a ? Ha maara otú na-edozi ?
12 March 2019 ka 20:37
Admilson Nahmias kwuru:
M nwere otu nsogbu na dịghị ihe ọ hụrụ na Internet, ruo mgbe a ẹkesikpede nyeere m aka, dị nnọọ eziga ndị na-esonụ SMS gị tracker:
Oge zone123456 0
Icheta na ọnụ ọgụgụ nke 1 a 6 Ọ bụ ndabara paswọọdụ, ma ọ bụrụ na ị gbanwere, etinye gị na paswọọdụ
26 Ka 2019 ka 21:26
na di aha m otu tracker ma n'ụlọ ma na-adịghị ka m nke pc na-ekwu na ọ bụrụ na m nwere page na m nwere ike na-unit si n'ebe
nwere ike inyere aka ?
5 April 2019 ka 21:30
Wilson Ferreira keobere kwuru:
gps 303 GSM GPRS tracker 303g ọkọlọtọ na-arụ ọrụ kwa ụbọchị ruo mgbe 21 awa bụ na-ahụkarị nke e mere ke etiti abalị azụ m zap 63 9*******8
18 June 2019 ka 15:55
ụtụtụ ọma….M a nkesa a họọrọ duda..porque 1 en TrackerHome….na nhọrọ nke a na ihe nkesa ga….ekele
4 September 2019 ka 10:12
Hello, i nwere ike na-agbalị ọzọ server. M kwuru server1, n'ihi na ọ bụ ihe nkesa na-ama ihe ule na ọ na-arụ ọrụ. amakụ
8 September 2019 ka 17:24
Ụtụtụ ọma m gps-egosi na-acha anụnụ anụnụ oké osimiri niile tracker anaghị arụ ọrụ n'ụlọ na-amasị onye maara ihe ngwọta. All SMS-eme nke ọma ma ikpo okwu adịghị na-arụ ọrụ
9 January 2020 ka 9:24
Luis A. Tinoco kwuru:
M mkpa enyemaka, na m chọrọ ka anya na mgbe ahụ dịghachi remote remote, ndị ọzọ karịa site na SMS, ọ bụ n'ihi web.
13 January 2020 ka 20:18
Goiania etemeete kwuru:
Ihe niile d ị d ị mma. Daalụ maka inye ọtụtụ ozi
ụzọ a maka mmadụ. m hụrụ n'anya.
28 March 2020 ka 4:44
rajitha arangala kwuru:
Mgbe m tinye nọmba IMEI maka ndebanye aha (http://www.gpstrackerxy.com/Login.aspx?Server=2) . Ọ ga-enye njehie ozi na IMEI na-ama-eji. Ihe m ga - eme ga - abụrụ nsogbu a.
18 September 2020 ka 22:08
Copyright © 2021 taylorlopes.com ebe Oct 2012, 2.965.940 ohere